LinkedIn Mbiri uye Mashandisiro | Martech Zone
Svondo, July 10, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Nemushandisi mutsva ari kuwedzerwa sekondi yega yega, kukosha kweLinkedIn kuri kukura kwekutsvaga kwevanhu zvine chekuita nebhizinesi. Zvichida imwe yeanonyanya kufadza manhamba ndeyekuti makumi mana kubva muzana emazana mashanu akaongororwa akataura kuti vaisawanzobaya kushambadziro yeLinkedIn nepo 40% yevashandisi vese vaiti vaive nazvo zvachose. Iine mamirioni zana evashandisi uye vari kukura, panogona kuve nekumwe kubatsirwa kwemamwe maindasitiri ekudyara muLinkedIn kushambadzira - Ndiri kuziva kuti chako chiitiko chave chii.
Maererano Lab42 webhusaiti: Lab42 ndiyo nzira iri nyore kwazvo yekutsvagisa musika wevatengi pamhepo uchishandisa masocial network. Kunyangwe iwe uchigadzira iyo yepamhepo ongororo neyedu yekuongorora yekushandisa chishandiso kana isu tinoita, Lab42 inowana vakapindura kune yako ongororo uye inoendesa mhedzisiro mu3 kusvika mashanu mazuva ebhizinesi. Zvese izvi tinozviitira $ 5 kusvika $ 500 1,000. Ndizvozvo - $ 500.
Mune maonero angu, hapana kushamisika kukuru kwakabva kuongororo iyi uye infographic kubva Lab42. Nekudaro, iwe ungashuve kuchengeta iyo network pamusoro peyepfungwa nguva inotevera iwe yaunoda kuyedza kumwe kushambadzira kwakabhadharwa.
Jul 10, 2011 na4: 01 PM
Zvide! Izvi zvinosimbisa kutenda kwangu kuti vanhu vazhinji vanoshandisa LinkedIn nguva dzose kupfuura zvatinogona kufunga. Ini ndinofunga vazhinji vebhizinesi nyanzvi senge LinkedIn kupfuura mamwe maratidziro nekuti haina zvese "zvisina basa" uye matauriro ayo mamwe maratidziro ane. LinkedIn inoenderera ichive chechipiri-chandinofarira pasocial network 🙂